Ultrasonic Humidifier Mini Mist Fogger diffuser amin'ny dia China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Description:Mini diffuser amin'ny fitsangatsanganana,Fogger Mini diffuser,Mini Mist diffuser
Home > Products > Mini diffuser > Ultrasonic Humidifier Mini Mist Fogger diffuser amin&#39;ny dia
Jiro LED mampitony: loko miloko 7 mampitony ary manana loko 2 (mazava sy marevaka) ny loko tsirairay, ka ho loko 14 ianao no hihaona amin'ny filanao samy hafa. Teknolojia adopted adabota, io diffuser aromatherapy io dia tsy hanelingelina ny fianaranao, miasa na hatory.
3 Fomba fanodinana fotoana: 3 ora, 6 ora ary mitohy.
Fahazavana 15 jiro: ity hazavana manitra ity dia manana hazavana 15 jiro hamoronana fientanam-po sy romana. Azonao atao ny manodika azy amin'ny loko 14, mametaka azy amin'ny loko iray voafaritra. Apetraho ao amin'ny efitranon'ny zanakao izany, ary ampiasao ho toy ny jiron'ny alina amin'ny torimaso matory amin'ny alina.
Fampitaohana tsy misy rano: Fitaovana rano mandeha amin'ny rano: 150ml. Io diffuser manitra ultrasonic io dia mety maharitra mandritra ny 6 ora. Namboarina miaraka amin'ny fiasa tsy mandeha rano tsy misy rano, ity mpanala oliva tena ilaina dia hijanona mandeha ho azy aorian'ny 5s rehefa mihazakazaka ny rano mba ho fiarovana anao sy ny fiarovana ny menaka manitra fofona.
Diffuser & Humidifier: Manampy menaka maromaro ao anaty rano no hamenoanao ny habaka misy fofona mahafinaritra. Ny menaka manokana dia afaka mamorona tombony fitsaboana. Azonao atao ihany koa ny mampiasa azy io ho toy ny humidifier rivotra tsy misy menaka manampy hamandoana bebe kokoa amin'ny efitrano mari-pana rivotra.
Mini diffuser amin'ny fitsangatsanganana
Fogger Mini diffuser
Humidifier portable amin'ny fitsangatsanganana
Mini Humidifier ho an'ny efitra fatoriana fitsangantsanganana
Aroma diffuser ho an'ny fisakafoanana
Fiara diffuser velona amin'ny fiainana
Mini diffuser ho an'ny birao